Tigidhada ee Fortune (Theme Park)
Theme Park Tigidhada ee Fortune boosaska – Bonus Mobile iyo Online!
Tigidhada ee Fortune (Theme Park) Afyare online, sii daayay bishii June 2016, waa Afyare ah midabo keenta park ee theme dhan aad screen. Waxaad heli doontaa fursado qaadashada oo dhan raacid ee park theme ah oo wuxuu ku raaxaysan badhaadhaha ku guuleysto lacag dhab ah. Waxa ay noqon doontaa kulan ah Tacaddi maxaa yeelay, this mishiinka Afyare online iyo mobile idin siin doonaa muuqaalada bonus bulk in la ciyaaro. ma awoodaan in ay go'aan wixii kortaan waa in aad doorato noqon doonaa in aad, sababtoo ah kortaan kasta iyo ciyaar kasta abaalgudi doonaa qaar ka mid ah abaal-marinno racfaan guuleystay.
Miyaad aragtay our Youtube, naadi oo Casino Videos Weli – waxay halkan u joognaa!
Net Entertainment waa horumarinta shirkad video ciyaarta online caanka in barayaa badan online naadi mobile sanadkasta. Shirkadda Tani waxay soo saartaa naadi mobile online salaysan mowduucyo kala duwan, sida khiyaali, ciyaaraha, iyo boosaska qaar ka mid ah waxaa lagu saleyn karaa shakhsiyaad caan ah. Waa markii ugu horeysay NetEnt waxaa soo bandhigid Tigidhada ee Fortune (Theme Park) Afyare online, taas oo ku salaysan yahay park ah theme midabo.
Tigidhada ee Fortune boosaska (Theme Park) Afyare online waa booska 5-ambadeen a online la 50 khadadka pay. Ciyaartoyda awoodi doonaan in ay miiqdaan duntu ka kaliya ee 25p iyo waxay awoodi doonaan in ay kordhiyo ilaa size bet in £ 250. Abaalmarinta Ghanna ayaa halkan waa £ 2,000 iyo guushii ugu badan waxay noqon kartaa wax badan ka weyn abaalmarinta Ghanna ah. Tani Afyare online leedahay calaamadaha ugu badan ee la xidhiidha theme iyo Blazers noqon doonaa astaanta duurjoogta ah oo ay la socdaan ku kala firdhi Golden Ticket.
Tigidhada ee Fortune (Theme Park) Afyare online idin siin doonaa tiro badan oo ah qaababka bonus. Caga saddex ama in ka badan wilds kulankii salka noqon doontaa nasiib ah in aad, sababtoo ah wilds muuqan karaan sidii wilds Mire Waqaf iyo xaddiga ku guuleystay uu noqon doono weyn u soo socda. Qaar ka mid ah alaabta cufan matali doonaa lacagta aad ayaa badisay iyo qadarka in lagu dari doonaa xisaabtaada.
feature wheel tigidh waa feature ugu cajiib ah booska this online. Waxaad miiqdaan karaa wheel tigidh by caga 3 ama kala firdhiyaa more. Isku day inaad ku guuleysto tikidhada ugu badan sababtoo ah tigidhada, kuwaas oo ku siin doonaa entry ah in park theme ah. awoodin in ay ciyaaraan ciyaaraha sida ciyaarta gan Duck Waxaad noqon doontaa, Skee Ball ciyaarta, Gaadhi Hammer Game iyo kulan kale oo badan iyada oo la isticmaalayo tigidhada.
NetEnt ay ciyaareyso ay ayaa soo bandhigay nooca cusub boosaska mobile online by horumarinta Tigidhada ee Fortune (Theme Park) Afyare online. Tilmaamo bonus Multiple weheliso sawiro midabo u celin gelin ugu wanaagsan ee booska online of 2016.